MURAAYADDA WAAYAHA “SICIR-BARARKA” (Q. 2) W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar | RBC Radio
MURAAYADDA WAAYAHA “SICIR-BARARKA” (Q. 2) W/Q. Maxammad Saleebaan Cumar
Posted on March 21, 2017 Maqaal, RBC, Wararka
MURAAYADDA WAAYAHA “SICIR-BARARKA” (Q. 2)
Qoraaga maqaalka,Maxammad Saleebaan Cumar
Mushkiladda sicirku ma aha dhibaato maanta abuurantay ee waa dhibaato la kowsatay abuuritaankii qarannimada Somaliland, toddobadii sanno ee u dambeeyayna xadhkaha goosatay.
Weyddiintu waxay tahay yaa ka masuul ah dhibaatadan? Waxa ka masuul ah dawladda oo gabtay kaalinteedii ku aaddanayd maamulka maaliyadda, adeegsiga dawladda ee lacagaha qalaad, awood-la’aanta bangiga dhexe, iyo arrimo la halmaala oo u baahan deraasad dhab ah. Taa waxa soo raaca, in aan dalkeennu lahayn waxsoosaar aynnu dhoofinno oo ay lacag adagi inooga soo hoyato. Lacagta adagi waxay dalkeenna ka soo gashaa dhoofka xoolaha nool, xawaaladaha iyo hay’adaha caalamiga ah. Dhoofkii xooluhu wuu hakaday, lacagtii xawaaladahana hoos-u-dhac baa ku yimid. Taa waxa barbar socota lacagta adag ee qaadka ee habeen walba dalka ka baxda. Waxa kale oo barbar socda lacagta Shilinka ee sida qorshe-la’aanta ah dawladdu isaga soo daabacato. Falgalka dhawrkaa xaaladood ee iska soo hor jeeda ayaa horseeday dheelliga iyo kala-badashada xad-dhaafka ah ee Shilinka dalka iyo Doollarka. Isku-miisaamidda isirradaas ayaa xalka ugu weyni ku jiraa.